प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गाैला प्रत्यारोपण सफल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गाैला प्रत्यारोपण सफल भएको छ । मिर्गौला दाता समीक्षा संग्रौलाको शल्यक्रिया सकिए लगत्तै सफलतापूर्वक प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको प्रा. डा. प्...
गाँजा खेतिलाई बैधता दिन माग गर्दै गैरसरकारी विधेयक दर्ता
काठमाडौं । पूर्व कानून मन्त्री शेर बहादुर तामाङले गाँजा खेतिलाई बैधता दिन माग गर्दै संसदमा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका छन । सोमबार सांसद तामाङलेुगाँजाको उपयोग औषधि निर्माण तथा यसको बोक्राको रेसाबाट ...
प्रचण्डलाई जुत्ता हान्ने युवक भन्छन, भाषण चित्त बुझेन जुत्ता हाने
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माथि सार्वजनिक कार्यक्रममा जुत्ता प्रहार भयो । राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित भरतमोहन अधिकारीको पहिलो स्मृति सभामा संबोधनपछि जुम...
प्रधानमन्त्री ओलीको बुधबार मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी बुधबार मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिने भएको छ । आइतबार बसेको नेकपा सचिवालयको बैठक पश्चात नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीको बुधबार शि...
काठमाडौं । निर्वतमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा न्याय माग्दै अदालत पुगेका छन । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि स्वीस एजेन्टसँग ७० करोड कमिसनका लागि कुराकानी भएको अडियो सार्...
काठमाडौं । निवर्तमान उपसभामुख डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फे कानूनमन्त्री बन्ने भएकी छिन । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको बहिर्गमनसँगै भानुभक्त ढकालले समाल्दै आएको कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी तु...
गत फेब्रुअरी ८ मा दिल्ली विधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । उक्त निर्वाचनमा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले दिल्ली मतदातासँग खुला घोषणा गर्दै मत मागे । उनले भने, म र मेरो सरकारले काम गरेको तपा...
काठमाडौँ । बालुवाटार स्थित .ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले अख्तियारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाइएको बारे अख्तियारलाई १५ दि...